စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပညာရေး in ဆားဘီးယား ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာလိုသောကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ် of ဆားဘီးယား ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတဆင့် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဆားဘီးယားလည်းအဖြစ်လူသိများဆားဘီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဆားဘီးယား ကျောင်းသားများအတွက် ပြည်ပမှာလေ့လာမှု in ဆားဘီးယားအဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပညာရေး in ဘဲဂရိတ် သို့ လေ့လာချက် in ဘဲဂရိတ် in တက္ကသိုလ်က of ဘဲဂရိတ် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဘဲဂရိတ် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဘဲဂရိတ် ပညာရေး in ဝမ်းနည်း Novi သို့ လေ့လာချက် in ဝမ်းနည်း Novi in တက္ကသိုလ်က of ဝမ်းနည်း Novi ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဝမ်းနည်း Novi ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဝမ်းနည်း Novi.
အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဆားဘီးယား | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဘဲဂရိတ် | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဝမ်းနည်း Novi
ဆားဘီးယား, အနောက်အလယ်ပိုင်းဘော်လကန်နိုင်ငံ။ ဆားဘီးယားတွင်ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာဆားဗီးယားဖြစ်ပြီးလူနည်းစုလူမျိုးစုများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကိုနိုင်ငံတော်၊ ပြည်နယ်နှင့်စည်ပင်သာယာအဆင့်များတွင်အသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများပြည်နယ် (အများပြည်သူ) နှင့်ပညာရေးအဆင့်ဆင့်အားလုံးကိုပုဂ္ဂလိကဖြစ်နိုင်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်တည်ထောင်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမခွဲခြားဘဲတူညီသောအသိအမှတ်ပြုမှုရှိသည်။
ဆားဘီးယားတွင်အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ရှိပြီး၊ အစိုးရအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ရန်ပုံငွေများကိုတိုက်ရိုက်ခွဲဝေချထားပေးပြီး ၄ င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာရန်ပုံငွေများကိုထိန်းချုပ်သည်။
အားလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများပြည်နယ် (အများပြည်သူ) နှင့်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်နိုင်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်တည်ထောင်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမခွဲခြားဘဲတူညီသောအသိအမှတ်ပြုမှုရှိသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါ
ဆားဘီးယားတွင်ပညာသင်ကြားသည် ဆားဘီးယားရှိပညာရေး | ဆားဘီးယားနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပညာသင်ပါ
ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | Novi Sad တွင်ကျောင်းတက်သည် | ဘီဂရိတ်ရှိပညာရေး | Novi Sad ရှိပညာရေး
ဆားဗီးယန်းအဖွဲ့အစည်းများ ရှည်လျားသောအရည်အသွေးမြင့်ပညာရေး၏အစဉ်အလာကိုပေး, 1800 ခုနှစ်တွင်အများအပြားထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဆားဗီးယားတက္ကသိုလ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ အနုပညာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကွန်ပြူတာနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များအပါအ ၀ င်မဟာဘွဲ့အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဆားဗီးယားသည်ပညာရေးအဆင့်အားလုံးတွင်အဓိကသင်ကြားသည့်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုအစီအစဉ်များလည်းတည်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ်များနှင့်ကောလိပ်များတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးကျောင်းသားများအတွက်အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ဥပမာ - အင်္ဂလိပ်ပါမောက္ခများနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်များသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရန်လျှောက်လွှာကိုတက္ကသိုလ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရယူပါ။ သီးခြားလျှောက်လွှာပုံစံကိုတစ်ခုထက်ပိုသောလျှောက်ထားလိုသောကျောင်းသားများကဖြည့်စွက်သင့်သည် ဆားဘီးယားအတွက်တက္ကသိုလ်။
အကယ်၍ တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားကသူတို့အရည်အချင်းပေါ် မူတည်၍ လက်ခံလျှင်၊ ကျောင်းသားသည်ကမ်းလှမ်းချက်စာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအတည်ပြုရန်ကျောင်းသားများသည်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခြင်းအားလက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်ဤစာကိုတုံ့ပြန်ရမည်။
ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုစရိတ်
ဘဲဂရိတ်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | Novi Sad တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Belgrade တွင်နေထိုင်မှုအတွက်တွက်ချက်မှုတန်ဖိုး | Novi Sad ရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းတွက်ချက်မှု
တက္ကသိုလ်များသို့ကျူရှင်ခသည်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၅၀၀ မှ ၂၅၀၀ အထိကျသင့်သည်။
ပျှမ်းမျှ ဆားဘီးယားအတွက်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ် မြို့ကြီးများအတွက်တစ်လလျှင် ၃၃၀-၅၅၀ ယူရိုရှိသည်။
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားရမ်းခမှာတစ်လလျှင်ယူရို ၂၂၀ ခန့်ရှိသည်
စျေးသိပ်မကြီးတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာအစားအစာ ၄ ဒေါ်လာကုန်ကျနိုင်သည်
ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ | ဆားဘီးယားကျောင်းသားဗီဇာ ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားပါဆားဘီးယား
သင်၏အင်တာဗျူးအပြီးတွင်နောက်ဆုံးဗီဇာမရရှိမှီနောက်ဆုံးလျှောက်လွှာတင်ခြင်းသည် ၁ ပတ်မှ ၃ ပတ်အထိကြာနိုင်သည်။
ဗီဇာအတွက်စံနှုန်းမှာ ၈၇ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် | ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားဗီဇာအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ဆားဘီးယားသည်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်လေ့လာမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုပါကအလုပ်ပါမစ်လိုအပ်သည် ဆားဘီးယားတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျောင်းသားသည်သင်၏တက္ကသိုလ်သို့မဟုတ်ကျောင်းပြင်ပရှိကျောင်းဝင်း၌အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အလုပ်လုပ်ခွင့်သည်လေ့လာမှုခွင့်ပြုချက်သက်တမ်းတစ်ခုအထိသက်တမ်းရှိသည်။ ကျောင်းသားများကိုတစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၂၀ သာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်။
ချင်သောကျောင်းသားများ ဆားဘီးယားတွင်အလုပ်လုပ်သည် သူတို့သည်စာမေးပွဲပြီးဆုံးလျှင်နောက်ထပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ဆားဗီးယားတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရပြီးနောက်၎င်းတို့အားဤနေရာတွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်။
လက်ရှိစည်းမျဉ်းများအရဆားဘီးယားတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ရက်သတ္တပတ် ၁-၂ ပတ်ခန့်ကြာမြင့်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်မှာယူရို ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားသည်တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၄၀ သာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဆားဘီးယားတွင် ၀ င်ခွင့်လျှောက်ထားရန် ဆားဘီးယားတွင်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားပါ
သို့ ဆားဗီးယားတွင်သက်ဆိုင်ပါသည် တက္ကသိုလ်များကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများရှိသင့်သည်။ စိတ် ၀ င်စားသည့်တက္ကသိုလ်၏လျှောက်လွှာပုံစံကိုစနစ်တကျဖြည့်စွက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ တက္ကသိုလ်များသည်သင့်လျော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ယခင်အရည်အချင်းများ၊ ဘဏ္informationာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလိုအပ်သည်။
ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ်အချို့သည်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများတောင်းခံနိုင်သည်။ ပရိုဂရမ်သည်မည်သည့်အထူးပြုမှုအတွက်မဆို GRE၊ GMAT သို့မဟုတ် LSAT ကဲ့သို့သောနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများအတွက်ရမှတ်များလိုအပ်ပါက။ ထိုအခါရမှတ်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသည်သက်သေပြရမည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု IELTS, TOEFL သို့မဟုတ် C1 အဆင့်မြင့်ဘာသာစကားလက်မှတ်များပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရမှတ်များသည်သတ်မှတ်ထားသည့်နိမ့်ဆုံးဘာသာစကားရသင့်သည် ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ်များ။
ဆားဘီးယားရှိပညာရေး | ငါတို့တစ်နေရာတည်း ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ် နှင့်အခြား 105 နိုင်ငံများ ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါ ဖုံးလွှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခု၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးအပါအဝင် ဘီဂရိတ်ရှိပညာရေး | Novi Sad ရှိပညာရေး ).
စျေးသက်သာသောစိတ်ကြိုက်ပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ များအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယား၌တည်၏ ဆားဘီးယားရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, ဆားဘီးယားရှိပြည်ပရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, ဆားဘီးယားတွင်ထိပ်တန်းသင်တန်းများ, ဆားဘီးယားရှိထိပ်တန်း MBA ကောလိပ်များ, ဆားဘီးယားရှိထိပ်တန်း MS ကောလိပ်များ, ဆားဘီးယားရှိထိပ်တန်း UG စီးပွားရေးကျောင်းများ, ဆားဘီးယားရှိထိပ်တန်း MBBS ကောလိပ်များ နှင့်ဆားဘီးယားအတွက်အများကြီးပိုပြီးသင်တန်းများ။
ငါတို့နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင်လည်းလူသိများသည်။ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင်, ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင်, နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင်, လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင်, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရေး ဆားဘီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင် နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင် ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင် တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင် ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယား၌တည်၏။
ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း * ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအတွက်အားမပေးပါ အခမဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက်တက္ကသိုလ်သည် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထို့အပြင်လူသိများဆားဘီးယား, နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက် ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားနှင့် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက်။
Belgrade ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Novi Sad ရှိတတ်နိုင်သည့်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Belgrade ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Novi Sad ရှိတတ်နိုင်သည့်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး
ကျောင်းသားတိုင်ပင်ဆွေးနွေး - ပညာရေးဆားဘီးယား
ပညာရေးအတွက်စီစဉ် ဆားဘီးယားတွင်, တက္ကသိုလ်များအတွက်ဝင်ခွင့် ဆားဘီးယား၏ဆားဘီးယားအတွက်လေ့လာဖို့
သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ဘယ်သူလိုအပ်တယ် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဘို့ ဆားဘီးယားဘယ်လိုလုပ် ဝန်ခံချက်ရ in ဆားဘီးယား in ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဆားဘီးယားရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါ, ဘီဂရိတ်ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဘီဂရိတ်ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်လေ့လာပါ, Novi Sad တက္ကသိုလ်များ ဘို့ Novi Sad ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် Novi Sad တွင်လေ့လာပါ ကျွန်တော်တို့ဟာဆားဘီးယားလိုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာယူခဲ့ပြီးပြီ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Novi Sad ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပြုနှင့်မိတ်ဖက်စုံလင်အတွက် ဆားဘီးယားတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဆားဘီးယားရှိအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များ ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာရန်၊ ဘီဂရိတ်ရှိတက္ကသိုလ်များ , Novi Sad တက္ကသိုလ်များ နှင့်လည်းအတွက်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ 106 နိုင်ငံများ ထောက်ပံ့ရန် ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ မြို့ကြီး ၃၂၆ မှနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များအပါအဝင်ဆားဘီးယားအတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံပါဝင်သည် ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Novi Sad အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့်ဘဲဂရိတ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက်မြို့ကြီး ၃၂၆၊ Novi Sad အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်။
ဆားဘီးယားအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် အပါအဝင် ဘဲဂရိတ်များအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဘဲဂရိတ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, Novi Sad အတွက်လူနေမှုစရိတ်တွက်ချက်မှု နားလည်ရန် Novi Sad ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်စရိတ်
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ဆားဘီးယားရှိပညာရေး နှင့်အကြောင်းပြချက် ဆားဘီးယားကိုလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းနှင့်သင်ဆက်သွယ်မည် ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ထို့အပြင်ဆိတ်ကွယ်ရာအခြားနိုင်ငံများအကြံပြုအပ်ပါသည် <="" p="">
သင်တို့၏ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာရန်သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားတွင်ကျောင်းသား၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသင်ဖြတ်သန်းလိမ့်မည် ဗီဇာ ဆားဘီးယားအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ဆားဘီးယားအတွက်, တစ်ချိန်ကသင် ဆားဘီးယားအတွက်ဝန်ခံချက်ကိုရယူပါ in ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ် သို့ ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါ ဘို့ ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် ဘဲဂရိတ် in ဘဲလ်ဂရိတ်တက္ကသိုလ် သို့ ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်လေ့လာပါ ဘို့ ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် ဝမ်းနည်း Novi in Novi Sad တက္ကသိုလ် သို့ Novi Sad တွင်လေ့လာပါ ဘို့ Novi Sad မှာပညာရေးသင့်အနေဖြင့်အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။
သင်စီစဉ်ထားလျှင် ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါငါတို့၏ ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ in ဆားဘီးယား သင့်အတွက်လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ် ဆားဘီးယားအတွက်ဝန်ခံချက် သင်ဆားဘီးယားတွင်ပညာသင်ရန်အတွက်သူတို့သည်လည်းအတွေ့အကြုံမျှဝေကြသည် အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် ဆားဘီးယား အပါအဝင် ဘီဂရိတ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း Novi Sad ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါအဝင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တွဲဖက် ဆားဘီးယား မင်းကိုကူညီနိုင်တယ် တိုက်ခန်းရှာခြင်း or ဘော်ဒါဆောင် ငှားရန်ရှိသည် ဆားဘီးယား.
ကျွန်တော်တို့၏ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သင့်တော်တဲ့အရာကိုရှာတွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ် တက္ကသိုလ် ဆားဘီးယား၌တည်၏။
ငါတို့အသင်း ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေး သင်လိုအပ်ကောင်းကူညီနိုင်မည့်မည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုသင့်အားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည် ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါသင်ချွေတာရန်အတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျမှု ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေး။
အောင်မြင်သည် အတွက်ဝင်ခွင့် ဆားဘီးယား အတွက်လေ့လာနေသည် ဆားဘီးယားမြို့များဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ဝင်ခွင့် ဘို့ ဘဲလ်ဂရိတ်၌လေ့လာနေ, Novi Sad တွင်ဝင်ခွင့် ဘို့ Novi Sad တွင်လေ့လာသည်
ရန်စီစဉ်လျှင် ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါထို့နောက်ရွေးစရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည် ဆားဘီးယားရှိမိတ်ဖက် ဆားဘီးယား၌သင်တို့၏ဝန်ခံချက်အဘို့, ငါတို့မှာ ထုတ်လုပ်သူသန်း သင်၏အစီအစဉ်များအောင်မြင်ရန်သေချာစေရန်အသင့်ဖြစ်နေသည် လေ့လာချက် ဆားဘီးယားသို့
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်၏အဖွဲ့ ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သင့်အတွက်သတင်းပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်အားပေးပို့ပါလိမ့်မည် ဆားဘီးယားရှိပညာရေးအပါအဝင် ကျောင်းသားဗီဇာ ဆားဘီးယားနှင့်အတူ ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ် သင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏အသုံးစရိတ်များကိုကြိုတင်နားလည်ထားရန်လိုသည် ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ် လေ့လာရန်သို့မဟုတ် နောက်ထပ်တိုင်းပြည် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပိုကောင်းလိမ့်မယ် အခြားတိုင်းပြည်များကိုစစ်ဆေးပါ, အစား, ဆားဘီးယား
ကူညီပေးပါ စာရွက်စာတမ်းများ ဘို့ ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
ကြီးကြပ်သည် သင့်အတွက်ဖြစ်စဉ် ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်လေ့လာပါ | Novi Sad တွင်လေ့လာပါ
ဆားဘီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်။
ဆားဘီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးသောတက္ကသိုလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆားဘီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအမြဲတမ်းအကြောင်းကြားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆားဘီးယားအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆားဘီးယားတွင်သင် ၀ င်ခွင့်ကိုလက်ခံပါကအပြည့်အဝထောက်ခံပါလိမ့်မည်။
ဆားဘီးယား၌ပညာသင်ကြားရန်၊ အဆက်အသွယ် ၁ မှတ် ပေး၍ သင်၏ ၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲကိုရိုးရှင်းစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေပါတယ်။
ဆားဗီးယားသို့သင်၏ပညာရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများရှိပါသည် ဆားဘီးယားရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအပါအဝင် ဘဲလ်ဂရိတ်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Novi Sad မှ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါ သင်ဆားဘီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့သည့်အခါပထမသုံးလတွင်သင့်အားခွဲဝေပေးလိမ့်မည်။ သင်သည်ဆားဘီးယားအတွက်သင့်အတွက်အဆက်အသွယ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်၊ သင်သည်သင်၏ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုСербияအတွက်သေချာစေမည်၊ ဆားဘီးယားရှိအဆောင် / တိုက်ခန်း၊ ဆားဘီးယား, လူအပေါင်းတို့သည်သင့်ကိုနားလည်ပြီးဆားဘီးယားရှိအချိန်, ပိုက်ဆံနှင့်အားထုတ်မှုကိုကယ်တင်ရန်ကူညီပေးသူတစ် ဦး တည်းကစောင့်ရှောက်သည်
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကိုလိုက်ရှာသည် ဆားဘီးယားအတွက်ဝန်ခံချက်တစ်ဦးအတွက် တက္ကသိုလ် or ဆားဘီးယားအတွက်ကောလိပ်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာ ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, အထူးထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။
ငါတို့သည်လည်းဆားဗီးယားနှင့် 105 နိုင်ငံများရှိအခြားတက္ကသိုလ်များသည်။
ဆားဘီးယားရှိ One Stop Shop နှင့်ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆
ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယားတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသော ၀ န်ဆောင်မှုများ။ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထွက် Out ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆားဘီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာကျင့်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့သည်ဆားဘီးယားတွင်သင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုမဆိုကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်လုံ့လဝီရိယရှိရှိကျွမ်းကျင်မှုများစွာရှိသည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဆားဗီးယားသို့ပညာရေး
ဆားဘီးယားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ဆားဘီးယားမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံမှပေးအပ်သောဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသည်ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့ပေးမည်နည်း။
ဆားဘီးယား၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံကထောက်ပံ့ပေး ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံဆားဘီးယားလည်းအဖြစ်လူသိများ ပြည်ပမှာဆားဘီးယား၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားတွင်ဆားဘီးယား၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယား၏နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယား၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယား၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယား၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယား၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယား၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, foreign education consultancy of Serbia, student consultant for Serbia, study consultancy of Serbia, abroad education consultants of Serbia, student consultants for Serbia, education consultancy of Serbia, educational consultant of Serbia, university consultancy of Serbia, education consultancy of Serbia and study abroad consultants of Serbia.
ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်ရရန် ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားပါ, ဘယ်လိုရရန် ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ , ဆားဘီးယား ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ထားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဆားဘီးယား ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ဆားဘီးယားကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ဆားဘီးယားကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ပြောပါ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဆားဘီးယားအတွက်။ ဘဲလ်ဂရိတ်များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာဘဲလ်ဂရက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Belgrade အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘဲလ်ဂရိတ်များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘေဂရိတ်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘီဂရိတ်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဘီဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ Novi Sad အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Novi Sad အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad ရှိပြည်ပရောက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Novi Sad တွင်အကြံဥာဏ်ယူပါ , Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအကြံပေးများနှင့်ယနေ့ Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ဆားဗီးယားကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ ဘေဂရိတ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘီဂရိတ်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘီဂရိတ်ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘေဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘလဂိုလ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒီနေ့ Belgrade အတွက်။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ဆားဗီးယားကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ Novi Sad မှအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး၊ Novi Sad မှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအကြံပေး၊ Novi Sad ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအကြံပေး၊ Novi Sad မှအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရှင်များနှင့်နိုင်ငံခြားမှအကြံပေးများ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့် Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးများ။
ဘာဖြစ်သလဲ LivingSerbia ၏ကုန်ကျစရိတ် or လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်ဆားဘီးယား၏ကုန်ကျစရိတ် , ကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်, ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် အိန္ဒိယကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ပါကစ္စတန်ကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် or အာဖရိကမှကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်?
ကျနော်တို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ ဆားဘီးယားအတွက်လူနေမှုတွက်ချက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ပါဝင်သည် ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်, ဆားဘီးယား၏လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်, ကျောင်းသားများအတွက်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်, ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အခြေခံကျသည် ဆားဘီးယားရှိသတင်းအချက်အလက်လူနေမှုစရိတ်.
ဘဲဂရိတ်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | Novi Sad တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Belgrade တွင်နေထိုင်ရန်တွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | Novi Sad ရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းတွက်ချက်မှု
ဆားဘီးယား၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ဆားဘီးယား၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ဆားဘီးယား၊ ဝန်ခံချက်ဆားဘီးယား, ဝန်ခံချက်ဖွင့်လှစ်ဆားဘီးယား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ခံချက်ဆားဘီးယား, MBBS ဝန်ခံချက်ဆားဘီးယား, ဝန်ခံချက်ဆားဘီးယား, ဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်ဆားဘီးယား, ကောလိပ်ဝန်ခံချက်အကူအညီဆားဘီးယား ဆားဘီးယား၊ ကောလိပ်ကျောင်း ၀ င်ခွင့်ဆားဘီးယား၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ဆားဘီးယား ၊?
ကျွန်တော်တို့၏ ဆားဘီးယားရှိအသိအမှတ်ပြုကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အဘို့သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး ဆားဘီးယားအတွက်ဝန်ခံချက် သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည် ဆားဗစ်, ဆားဘီးယား mba ဝန်ခံချက်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်ခံခြင်းဆားဘီးယား, ဆားဘီးယားသင်တန်းမာစတာများအတွက်ဝန်ခံချက်, ကောလိပ်ကျောင်းဝင်ခွင့်များဆားဘီးယား, ဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်များကိုဆားဘီးယား, ဆားဘီးယား, ဆားဘီးယားဘွဲ့အတွက်ဝန်ခံချက်, MBBS ဝန်ခံချက်ဆားဘီးယား, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဆားဘီးယား, ဝင်ခွင့်ဆားဘီးယား, ကောလိပ်ဝန်ခံချက်အကူအညီဆားဘီးယား, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဆားဘီးယား နှင့် ဆားဘီးယား.
ဆားဘီးယားတွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (သို့) ဆားဘီးယားအွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားလို့ရနိုင်မလား။
အလိုလျှင် ဆားဘီးယားအတွက်တက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ဆားဘီးယားတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ဆားဘီးယားအတွက်အွန်လိုင်းပညာရေး or ဆားဘီးယားအတွက်အွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ဆက်သွယ်ပါ ဆားဘီးယားအတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ်မှအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘယ်ဂရိတ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘလဂိုလ်အတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဘီဂရိတ်တွင်အတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေးနှင့်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်၊ ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘလဂိုလ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘလဂိုလ်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘီဂရိတ်ရှိကမ္ဘာ့အတိုင်ပင်ခံ၊ ဘေဂရိတ်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိတက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုဂျစ် Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိအတိုင်ပင်ခံလေ့လာခြင်း၊ Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး၊ Novi Sad ပညာရေးအကြံပေး၊ Novi Sad ကျောင်းမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ပညာရေးအကြံပေး၊ Novi Sad ပညာရေးအကြံပေး၊ Novi Sad ပညာရေးအကြံပေး၊ Novi Sad ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ Novi Sad ရှိပညာရပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံများ၊ Novi Sad ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအကြံပေးများ၊ နိုင်ငံခြားပညာရေးအကြံပေး၊ Novi Sad, Novi Sad ပညာရေးအကြံပေး။
ဆားဘီးယားရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများအတွက် ၀ င်ခွင့်အတွက်ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ပေးပါသလား။ ဆားဘီးယားတွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား (သို့) ဆားဘီးယားရှိအွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် ဆားဘီးယားအတွက်တက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ဆားဘီးယားတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ဆားဘီးယားအတွက်အွန်လိုင်းပညာရေး or ဆားဘီးယားအတွက်အွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မည်။ "
ဘီဂရိတ်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | Novi Sad အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဘီဂရိတ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | Novi Sad အွန်လိုင်းသင်တန်း
ဘို့ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်း တစ်ဦးအတွက် ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ်, ဆားဘီးယားရှိပညာရေး ဦး စီးဌာန or ဆားဘီးယားရှိပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန များအတွက်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးပါသည် ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက် ၀ င်ခွင့်, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကက ဆားဘီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းပေးလိမ့်မည် ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ပါ or ဆားဘီးယားတွင်လေ့လာပါ။ ဒါ့အပြင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ ပညာရေးဦးစီးဌာန, ဆားဘီးယား / ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန, ဆားဘီးယား။
ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်လေ့လာပါ | Novi Sad တွင်လေ့လာပါ | ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Novi Sad တွင်ကျောင်းတက်သည်
ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာရရန်နှင့်ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာကိုမည်ကဲ့သို့လျှောက်ထားရမည်နည်း၊ ဆားဘီးယားကျောင်းသားဗီဇာစည်းကမ်းများ၊ ဆားဗီးယားကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၊
လျှောက်ထားရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဆားဗီးယားကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ဆားဘီးယားကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ဆားဘီးယားကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲ အချိန်အဆက်အသွယ် ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ.
ဆားဘီးယားရှိတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်ပြီးနောက်ကျောင်းသားများ၏အလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာ (သို့) ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ကျနော်တို့များအတွက်စည်းမျဉ်းများစာရင်းပြုစုပါပြီ ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် အပေါ်က ဆားဘီးယားနိုင်ငံသားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် or ဆားဘီးယားကျောင်းသားဗီဇာဝန်ခံချက်ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ဆားဘီးယားအတွက်တက္ကသိုလ်၌တည်၏။ အဖြစ်လူသိများ, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘီဂရိတ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘေဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘလဂိုလ်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘီဂရိတ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘလဂရက်ကျောင်းသူကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘီဂရိတ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နို ၀ င်ဆတ်၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နို ၀ င်ဆတ်၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိတက္ကသိုလ်မှအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad မှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad၊ Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရပ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ Novi Sad ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad မှအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ ပြောပါ ဆားဘီးယားတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ.
ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ဆားဘီးယားမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ ဘဲလ်ဂရိတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဘဲလ်ဂရိတ်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Novi Sad မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Novi Sad ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ?
ဤရွေ့ကားများအတွက်အသုံးပြုကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည် ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံအခြားအသုံးအနှုန်းများမှာ ဆားဘီးယားအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားအတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘယ်ဂရိတ်တွင်နိုင်ငံရပ်ခြားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘလဂိုလ်အတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ဘဲလ်ဂရိတ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ဘဲဂရိတ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိ udent အတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad မှအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad မှအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိတက္ကသိုလ်မှအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအကြံပေး၊ Novi Sad ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi Sad ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Novi အတွက်အတိုင်ပင်ခံ ဝမ်းနည်းပါတယ်, Novi Sad အတွက်နိုင်ငံခြားရေးအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Novi Sad အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ။
၀ င်ခွင့်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ ဆားဘီးယား
ဘီဂရိတ်ရှိတက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် | Novi Sad တက္ကသိုလ်ရှိကျောင်းဝင်ခွင့်
Novi Sad ရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်အရေးကြီးသောစကားလုံး
စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ကြီးဌာန
ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန
စွမ်းအင်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
Destination Serbia - ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးဌာန
ဘီဂရိတ် Philharmonic သံစုံတီးဝိုင်း
Novi SAD ၏ UNIVERSITY
Braca Karic တက္ကသိုလ်
Novi Pazar ၏နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်
အသုံးချသိပ္ပံ Megatrend တက္ကသိုလ်
Metropolitan University မှ
Privredna Akademija (စီးပွားရေးအကယ်ဒမီ)
Novi Sad တက္ကသိုလ်
Imp ။ အင်ဖို - ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်ခ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဆားဗစ်ပညာရေးဌာန / ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆားဘီးယား မည်သည့်တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုသည်။